Sorry, Ma Sorry - Sidee Kids raali | SmartKidParenting.com
Sorry, Ma Sorry – Sidee Kids raali
Ugu waalidiinta ceeb heshiis la jooga markay ilmahooda, (on Ujeedada ama qalad ah), dhaawaco ilmo kale. Dabcan, waxaan nahay mortified, iyo carruurtayadaba ha soo qaado on our yaab xooggan ka hor inta aysan xitaa waxay leeyihiin fursad si ay u dareemaan in ay jawaab u gaar ah.
Haddaba, waxaan noqday ugu baahan our ilmaha in la yidhaahdo, "Waan ka xumahay." Waxaan ku tiirsan yihiin kuwa laba eray oo la xaliyo xaalada jirta iyo caawin na badbaadi wejigiisa waalidka kale.
Laakiinse ilmahaagu Wareersanyihiin. Sidee u dhaqaaqo wiilka in jidka ka dhigi ku dhaco?
Carruurta ha dhakhso ma u nuugo xaalad ama si toos ah uga jawaabaan sida dadka waaweyn u samayn. Waxay qaadan wax yar ka dheer si uu u dheefshiido waayo-aragnimo ah iyo waxa ka arrinsashada. Ilmo waxaa laga yaabaa in kaliya uu bilaabay in uu wada saaray waxa dhacay, markii si lama filaan ah iyada lagu Ciqaahtii in cadaadis weyn ka imaanaya iyada hooyo ama aabe.
"U sheeg wiilka aad ka xumahay,"Waxay dhihi qarsan ee ka dhigaya gabar ugu raaxo. Waxay doonaysaa in ay ka farxiyaan, laakiin qasbo erayada dareemi lahayd gebi ahaanba been ah, iyo Dhoobdhoobeen dareen uusan si dabiici ah u yimid inuu ilmo. Waxaa la bartay.
Muddo sanado ah, waxaan maqlay kuwo badan oo ka mid ah raali qasbay. Waxaan fahamsanahay baahida waalidka iyaga u hayo, laakiin waxaan u leeyihiin in ay iyagu mar walba qiran i ko'ga.
Si dhab ah raaligelin u baahan tahay fahamka, iyo damqasho yeesho in ay jidka u gaar ah iyo waqti, xawaaro kala duwan ee ilmo kasta. Sidaas, inta badan ilmaha ma aha horumarin diyaar u ah in la fahmo, badan ka yar leedahay erayada iyada ku yidhi.
Maxaa i walwal inta badan waa ilmaha, maxaa yeelay, daryeelaha ayaa riixay isaga u sheegeen xumahay,'Helo farriinta ah in raali rajeenayo in wax walba oo. Waxa uu gacan qaad ilmo kale, laakiin inta uu sheegay in, "Waan ka xumahay,"Ayuu raalli ahaato iyo dhaqaajin karin on, ama xataa mar kale sameeyo. Waxaan waa khalad in ay rumaysan nahay baro fahamka by qasbo raaligelin daacad ahayn.
Sidaas, waxa aan samayn karnaa marka canuggeenna dhaawaco qof?
Haddii ilmuhu uu leeyahay u janjeera in ay jilaan carruurta kale marka uu daal ama ka careysan, waxaa ugu wanaagsan in ay ku dhow in ay soo fara ka hor wiil kale ay waxyeello.
1)Waxaan si adag u dhihi kara, "Anigu ma sii dayn doonaa inaad ka dhacay,"Ka dibna la abuuro soohdin jirka u dhexeeya carruurta gacanta our la, ama
2)Waxaa laga yaabaa inaan u leeyihiin in ay ku Xidhaan, our ilmahaaga inuu isaga joojin. Haddii aynu nahay goor dambe oo ilmo yar waxaa lagu yeelin, waa in aan raali naqo in ilmaha dhaawac iyo waalidka uu ka dibna ay u badan tahay si canuggeenna uu si deg deg ah ka soo saarto xaaladda - waxa la joogaa wakhtigii si ay u tagaan guriga.
Guud ahaan, marka caruurta yar yar si ula kac ah u dhaqmaan qalafsan, ay digayaan in ay dareemaan 'out of control' oo u baahan ka-qabashada. Waxay lagama filan karo in ay soo jeedin on dime a, naftooda ka koobanahay, iyo shaleyte express.
Haddii ilmahaagu jir ku filan si ay u fahmaan raaligalinta iyo kale dhaawaco by shil, weli waa fiican in aan si toos ah ilmaha in ay ka jawaabaan. Better in ay qirtaan xaaladda, sugaan, ka dibna u qaabeeyaan dhaqanka waxaan doonaynaa in ilmahaagu in ay ku daydaan.
Mararka qaarkood, waxaa jira siyaabo ka fiican in la wanaajiya ka raali, oo markay ku kalsoon tahay in ay si dabiici ah uga jawaabaan, carruurta soo duuli doonaa la dhaqdhaqaajinta naseexeeyaan on iyaga u gaar ah. Wiil The kii amaantii uu soo horjeeda oo ku saabsan dib markii ay isku garoonka kubadda cagta, baradka ah oo bixiya toy ah in ilmaha looga ooyayaa, iyo gabadhiisa, kuwaas oo loogu talagalay gaadho shukumaan in la tirtiro ilaa juice ka daadanayaa ayaa dhamaantood ku simaha ka mid ah fahamka dhab ah.
Haddii aan rabno in aannu ilmahaaga si uu u muujiyo raaligelin daacad ah, waa in aan bukaanka oo aan riix. Tan iyo hamigeena waa for our ilmahaaga inuu wanaajiya xaqiibay uu sababtoo ah waxa uu si dhab ah iyaga oo ka xun, waa in aan isaga ku kalsoon tahay si aad u hesho ereyada wakhtiga.
Waxaan jira tusaalooyin awood badan carruurta oo dhan waa aadanaha. Waxaan baro "waan ka xumahay" fiican by waxaa tusaale u noqosho. Carruurtu waxay u baahan inaad na maqli raali kuwa kale, iyo sidoo kale iyaga. Waxay u baahan yihiin in ay ogaadaan in bani aadamka aan kaamil. Marka aynu nidhaahno to our ilmaha, "Waan ka xumahay, Waxaan qalad sameeyay,"Waxaan ku siin ogolaansho ilmahaaga inuu aad qaladaad samayso ka.
Inkasta oo aanu u noqosho raali, caruurteena mar kale iyo mar ina bari doonaa oo ku saabsan dambi dhaaf. Si dadban fahamka aqoonla'aanta ku dhiggooda ah, caruurta caadiga ah si deg deg ah ku cafiyo iyo laabto wada ciyaaro. Waa in aan caruurteena ku siiyo in naxariisan isla. By caruurteena isku halleeyaa si ay u horumariyaan jawaabaha bulshada dhab ah, waxaan iyaga siin ah is-kalsooni in uu noqdo xasaasi ah oo qoto dheer daryeelka aadanaha waxaana rajeyneynaa inay noqon doonaan.